Vokatra famokarana zezika marobe - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Masinina Groove Type Composting Turner
Masinina Turner Composting Turner Machine
Crawler Hydraulika Compost Turner
Turner Comosting aody mihodina
Tondra-drano mitsivalana marindrano
Masinina kodiarana Composting Turner Machine
Turner fanodinana visy roa
Tankina fanamafisana mitsangana
Fitaovana fanaovana composting karazana Forklift
Milina Composting Turner mandeha ho azy
Granulator zezika biolojika karazana vaovao
Disc Organizer & Compound Granulator zezika
Granulator zezika voajanahary karazana & fitambarana karazany vaovao
Masinina Granulator Zezika Organika & Compound Vaovao
Granulator Extrusion matevina
Granulator avo roa heny
Fitaovana zezika voajanahary semi-wet amin'ny fampiasana Crusher
Masinina mpamaky vovoka rojom-bary
Masinina mpamaky zezika roa-dingana
Masinina mpamaky zezika Urea
Masinina Cage Mill Cage Mill
Mpanimba volo sy kitay hazo
Masinina mixeur zezika roa
Mpifangaro zezika marindrano
Masinina mixeur disc
Mixeran'ny zezika BB
Mixer zezika mitsangana
Zina fanamainana zezika & sery mangatsiaka
Masinina fanamainana varingarin'ny Rotary tokana amin'ny fanodinana zezika
Masinina fanamainana Drum Rotary
Masinina mifono zezika rotary
Fampiroboroboana ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy
Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza
Masinina fanamafisana ny onja fanoherana
Milina Rotterie Drum
Screener amin'ny varotra Linear
Milina fehikibo fehikibo
Mpanatitra fehikibo finday azo entina
Mpampita ny fehikibo mahitsy mitsivalana mitsivalana
Elevator amin'ny siny
Masinina fanangonana zezika mandeha ho azy
Screw Extruding FAMPISEHOANA Separator Solid-Liquid
Masinina fampifangaroana fampifangaroana disk mitsangana
Milina fampidinana & famahanana
Masinina fonosana mandeha ho azy
Masinina fonosana avo roa heny Hopper
Masinina poloney boribory biolojika
Masinina fametahana zezika miorina
Mpisaraka amin'ny ranoka matevina mifangaro
Tsipika famokarana zezika voajanahary
Fampidirana ny tsipika famokarana zezika organika
Tsipika famokarana zezika biolojika kely.
Tsipika famokarana zezika biolojika vovoka
tsipika famokarana zezika voajanahary.
20 000 taonina tsipika famokarana zezika
Tsipika famokarana zezika 30.000 taonina
Tsipika famokarana Granulation Disc
Tsipika famokarana zezika organika 50 000 taonina
Tsipika famokarana zezika marobe
Tsipika famokarana zezika mitambatra
Tsipika famokarana zezika tsy misy fanamainana tsy misy maina
Tsipika famokarana zezika 20 000 taonina
Tsipika famokarana zezika 30 000 taonina
Tsipika famokarana zezika mitambatra 50 000 taonina
Manana traikefa feno amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra izahay. Tsy mifantoka amin'ny rohy fizotrany tsirairay fotsiny isika amin'ny fizotry ny famokarana, fa mahatakatra hatrany koa ny antsipirian'ny fizotran'ny tsipika famokarana iray manontolo ary hahatratra tsara ny fifandraisana. Manome vahaolana namboarina namboarina mifanaraka amin'ny tena ilain'ny mpanjifa izahay.
Ny fizotry ny famokarana feno dia iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fiaraha-miasao amin'ny Yuzheng Heavy Industries. Izahay dia manome ny drafitra famolavolana sy ny fanamboarana andalana famokarana granulation amponga feno.
Telefaona: + 86-18621801335
Ny zezika sarotra dia zezika mitambatra misy azota, phosforus ary potasioma, izay afangaro arakaraka ny ampahany amin'ny zezika tokana ary mihombo amin'ny fiota simika. Ny votoatin'ny otrikaina dia mitovy ary ny haben'ny sombina dia mitovy. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia manana fahaiza-mifanaraka betsaka amin'ny fametahana ireo akora zezika zezika.
Ny zezika kompana dia manana ny maha-izy azy ny granulation fanamiana, ny loko mamirapiratra, ny kalitao milamina, ary ny famafana mora azo tototry ny voly. Manokana, azo antoka ny fiarovana ny voa hamboly zezika. Mety amin'ny karazan-tany sy varimbazaha, katsaka, melon sy voankazo, voanjo, legioma, tsaramaso, voninkazo, hazo fihinam-boa ary vokatra hafa. Izy io dia mety amin'ny zezika fototra, zezika, fanenjehana zezika, zezika ary fanondrahana.
Akora azo ampiasaina amin'ny famokarana zezika biolojika
Ny akora simika amin'ny famokarana zezika mitambatra dia ahitana urea, amonium klôro, amoniôma sulfate, amoniaka ranon-javatra, monômpôfôfika amoniôma, fôfatô diômônia, potasiôma klôroida, potasioma sulfate, ao anatin'izany ny tanety sasany ary ny mpameno hafa. Ampiarahana amin'ny filan'ny tany ny akora biolojika isan-karazany:
1. Fako-biby: akoho, tain-kisoa, tain'ondry, fihiran'ny omby, zezika soavaly, zezika bitro, sns.
2, fako indostrialy: voaloboka, vinaingitra vinaingitra, residin'ny mangahazo, reside siramamy, fako biogas, reside volom-borona, sns.
3. Fako fambolena: mololo voly, lafarinina soja, vovoka landihazo sns.
4. Fako ao an-trano: fako ao an-dakozia
5, fotam-potaka: fotaka an-tanàn-dehibe, fotaka amin'ny renirano, fotaka fanivanana sns.
Tabilao mikoriana famokarana
Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia miaraka amina singa mavitrika, blender roa-axis, granulator zezika zezika vaovao, crusher rojo mitsangana, cooler fanamainana amponga, milina sieve amponga, milina fanosotra, mpanangona vovoka, fonosana mandeha ho azy milina sy fitaovana fanampiana fanampiny.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana famokarana zezika anay, dia manome mpanjifa tsipika famokarana 10 000 taonina isan-taona ka hatramin'ny 200.000 taonina isan-taona.
1. Ny tahan'ny granulation dia avo hatramin'ny 70% miaraka amin'ny masinina granulation drum.
2. Ireo singa manan-danja dia mampiasa fitaovana maharitra-mahatohitra sy harafesina, ary ny fitaovana dia manana androm-piainana maharitra.
3. Ny granulator amponga rotary dia nopetahany takelaka silipo na vy tsy misy fangarony, ary tsy mora ny mifikitra amin'ny rindrina anatiny ao amin'ilay masinina.
4. Fandidiana miorina, fikolokoloana mety, fahombiazana avo lenta ary fanjifana angovo ambany.
5. Mampiasà conveyor fehikibo hampifandray ny tsipika famokarana iray manontolo hahatratrarana famokarana mitohy.
6. Mampiasà efitrano fanesorana vovoka roa hikarakarana entona rambony ho fiarovana ny tontolo iainana.
7. Ny fizarazaran'ny asa amin'ny sivana roa dia manome antoka fa ny haben'ny sombintsombiny dia mitovy ary ny kalitao dia mendrika.
8. Fampifangaroana fanamainana, fanamainana, fampangatsiahana, firakotra sy fizotra hafa mahatonga ny vokatra vita ambony kokoa amin'ny kalitao.
Fandehanan'ny fizotry ny tsipika famokarana zezika mitambatra: akora simika → fangaro amin'ny akora → granulation → fanamainana → fampangatsiahana → fanaraha-maso vokatra vita → sombina potika plastika → firakofana → fonosana vita vita → fitehirizana. Naoty: io tsipika famokarana io dia ho an'ny referansa ihany.
Araka ny fangatahan'ny tsena sy ny valin'ny famaritana ny tany eo an-toerana, ny urea, ny amonium nitrate, ny amonium klôro, ny amonium thiophosphate, ny amonium phosphate, diammonium phosphate, calcium calcium, potassium chloride (potassium sulfate) ary ireo akora hafa dia nozaraina tamin'ny ampahany iray. Ny additives, ny soritry ny singa sns ... dia ampiasaina ho singa amin'ny ampahany iray amin'ny alàlan'ny mizana fehikibo. Raha ny tahan'ny raikipohy, ny fikajiana akora rehetra dia mivezivezy avy amin'ny fehikibo mankany amin'ny mixers, dingana iray antsoina hoe premixes. Izy io dia miantoka ny fahamarinan'ny famolavolana ary mahatratra ireo akora mitohy mahomby.
Ny akora efa nomanina dia mifangaro sy afangaro tsara, mametraka ny fototra ho an'ny zezika granular avo lenta sy avo lenta. Ny mixer marindrano na ny mixer disk dia azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana sy fanetsehana.
Ny fitaovana aorian'ny fampifangaroana sy fanorotoroana dia entina avy any amin'ny conveyor fehikibo mankany amin'ny granulator zezika zezika vaovao. Miaraka amin'ny fihodinan'ny amponga tsy tapaka, ny fitaovana dia mamorona fihetsiketsehana mihodina amin'ny lalana iray. Eo ambanin'ny tsindry extrusion namboarina dia ampiarahina ho potika kely ilay fitaovana ary apetaka amin'ny vovoka manodidina mba hamorona endrika boribory mahay. Granules.
3. Granules maina:
Ny fitaovana granulation dia mila maina alohan'ny ahafahany mahafeno ny fepetra takiana amin'ny atin'ny hamandoana. Rehefa mihodina ilay mpanamainty dia manainga sy manipy ny vongan-tsolika hatrany ny vilia fananganana ao anatiny, mba hifandraisana tanteraka amin'ny rivotra mafana ny fitaovana hanalana ny hamandoana avy aminy, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanamainana fanamiana. Izy io dia manana rafitra fanadiovan-drivotra mahaleo tena hamoaka entona fanalefahana afovoany ary hitsitsy angovo ary hampihena ny fihinanana.
4. Granule mangatsiaka:
Rehefa maina ny sombin-javatra dia mila alefa any amin'ny cooler izy ireo mba hampangatsiaka. Ny cooler dia ampifandraisin'ny conveyor fehikibo amin'ny fanamainana. Ny fihenan-tsakafo dia afaka manala vovoka, manatsara ny fahombiazan'ny fihenan-tsasatra ary ny fampiasana angovo hafanana, ary manala ny hamandoana avy amin'ireo poti.
Aorian'ny fampangatsiahana ireo sombin-javatra, dia zahana amin'ny sivana sivily ny sombintsombiny tsara sy lehibe. Ireo vokatra tsy voamarina izay namboarina avy amin'ny conveyor fehikibo mankany amin'ny blender dia atsofoka ary alaina miaraka amin'ny akora indray. Ny vokatra vita dia halefa any amin'ny milina fanosotra zezika mitambatra.
Ampiasaina indrindra izy io mba hametrahana sarimihetsika miaro fanamiana eo ambonin'ny potipotika vita quasi mba hanatsarana tsara ny ain'ny poti-potika ary hampandeha tsara ny sombin-javatra. Aorian'ny fonosana, io no rohy farany amin'ny fizotry ny famokarana manontolo - fonosana.
Ity dingana ity dia mandray milina famonosana isa ho azy. Ny masinina dia misy milina fandanjana mandeha ho azy, rafitra mpampita, masinina famehezana, sns. Azonao atao koa ny manamboatra hopper arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Izy io dia afaka mahatsapa ny fonosana habetsahan'ny akora betsaka toy ny zezika biolojika sy zezika mitambatra.
WuLong Industrial Park, Distrikan'i Xingyang, Zhengzhou City, faritanin'i Henan, Sina